Sary Mampiseho Ny Hatsaran-tarehin’ny Lolo Ao Nepal · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Jona 2017 16:02 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Español, Ελληνικά, Português, Italiano, русский, Français, नेपाली, عربي, 繁體中文, 日本語, Deutsch, English
Cethosia biblis na Elatra tadin-kiraro mena. Sary avy amin’ i Susheel Shrestha. Nahazoana alàlana.
Mahaliana hatrany ireo mpitsangatsangana, mpianika tendrombohitra, mpitia zavaboary sy ny mpakafy fitaintainana ny firenena Himalayana ao Nepal. Na izany aza, raha toa ianao ka mpanangona karazana lolo, dia toerana tonga lafatra ho anao izany mba hanatanterahanao ny fahaliananao. Mirehareha amin'ny fananana karazana lolo mihoatra ny 650 i Nepal, izany hoe ny 3,72 isan-jaton'ny karazana lolo eto amin'izao tontolo izao .
Hita eny rehetra eny ny lolo ao Nepal, avy any amin'ny ala mikitroka any amin'ny faritry ny lemaka atsimo hatrany an-tendrombohitra any amin'ny faritra avaratra. Toerana tsara ahitana ilay bibikely manan'elatra ny havoana manodidina ny Lohasaha Kathmandu. Ny vanim-potoanan'ny volana Martsa-Jona sy Aogositra-Oktobra no tena fizaran-taona fizahana lolo.
Nahazo ny sarin'ny karazana lolo mihoatra ny 150 izay hita ao Nepal avy any amin'ny tany lemaka hatrany amin'ny faritra avo any amin'ny 3810 metatra ao Mustang Ambony i Susheel Shrestha, mpaka sary iray mahaleotena.
Mpandresy tamin'ny fifaninanam-pirenena maro momba ny sary, nilaza tamin'ny Global Voices i Shrestha fa : “mihena isan'andro isan'andro ny toeram-ponenan'ny lolo noho ny isan'ny mponina tsy mitsaha-mitombo .”
Mankafy tanteraka ny bibikelin'ny natiora sy ny sarin'ny zavaboary, manohy ny fanapihana sary lolo i Shrestha , ary mikasa ny hamokatra boky lehibe mba hanehoana ny hatsaran-tarehin'i Nepal sy hampiroboroboana ny fizahantany ao amin'ny firenena.
Ireto ny sasany tamin'ireo lolo izay azony sary tamin'ny fakantsariny tany amin'ny faritra maro ao Nepal.
Papilio demodocus na Voalin-dakana. Sary avy amin'i Susheel Shrestha. Nahazoana alàlana.
Melanitis leda. Sary avy amin'i Susheel Shrestha. Nahazoana alàlana.
Pieris canidia na Laisoa Indiana Fotsy. Sary avy amin'i Susheel Shrestha. Nahazoana alàlana .
Pieris canidia eo amin'ny voninkazon'ny motarda. Sary avy amin'i Susheel Shrestha. Nahazoana alàlana.
Eurema blanda na Tsitelotelo mavo. Sary avy amin'i Susheel Shrestha. Nahazoana alàlana.
Tsitelotelo Mavo mifanaraka. Sary avy amin'i Susheel Shrestha. Nahazoana alàlana.
Catopsilia pomona na Matroka Mirahona Mavo. Sary avy amin'i Susheel Shrestha. Nahazoana alàlana.
Loxura atymnus na Yamfly. Sary avy amin'i Susheel Shrestha. Nahazoana alàlana.
Graphium agamemnon na Lakamboaly Maitso. Sary avy amin'i Susheel Shrestha. Nahazoana alàlana.
Tsy i Shrestha irery no olona manao fanadihadiana ny lolo ao Nepal. Fa ao koa ilay olom-pirenena Britanika iray, Colin Smith, izay nandany 50 taona mahery tamin'ny fianarana lolo tao Nepal. Nitety distrika miisa 40 izy tamin'ny fanangonana lolo miisa 25.000 ary nanoratra ilay boky voaravaka mitondra ny lohateny hoe Illustrated Checklist of Nepal’s Butterflies na Ny Lisitra Antsarin'ny Lolo Ao Nepal .
Ny lolo nangonin'i Smith antsoina hoe ‘Putali Baje’ izay midika ihany koa hoe ‘Dadabe Lolo’ amin'ny teny Nepali dia naranty tao amin'ny Mozea Tantaran'ny Natiora , Kathmandu; Mozean'ny Lolo Annapurna , Pokhara; ary tao amin'ny Oniversiten'ny Kathmandu ao Dhulikhel.